“Nweenụ Obi Ike! Emeriwo M Ụwa” (Jọn 16) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
N’OGE NA-ADỊGHỊ ANYA, NDỊOZI JIZỌS AGAGHỊZI AHỤ YA
UJU NDỊOZI JIZỌS NA-ERU GA-AGHỌ ỌṄỤ
Jizọs na ndịozi ya ejikerela ịpụ n’ọnụ ụlọ ahụ dị n’elu, bụ́ ebe ha nọ rie nri Ememme Ngabiga. Ebe ọ bụ na Jizọs agwala ha ọtụtụ ihe ha ga-eme, ọ gwara ha, sị: “Agwawo m unu ihe ndị a ka unu wee ghara ịsụ ngọngọ.” Gịnị mere ihe a ọ gwara ha ji kwesị ekwesị? Ọ bụ n’ihi ihe a ọ na-aga ikwu. Ọ sịrị: “Ndị mmadụ ga-achụpụ unu n’ụlọ nzukọ. N’eziokwu, oge awa na-abịa mgbe onye ọ bụla nke ga-egbu unu ga-eche na ya jeere Chineke ozi dị nsọ.”—Jọn 16:1, 2.
Ihe a Jizọs gwara ndịozi ya nwere ike ịna-ewute ha. Ọ bụ eziokwu na Jizọs agwabuola ha na ụwa ga-akpọ ha asị, o nwebeghị mgbe ọ gwara ha na a ga-egbu ha. Gịnị mere na ọ gwaghị ha ya kemgbe? Jizọs sịrị: “Agwaghị m unu ihe ndị a na mbụ, n’ihi na mụ na unu nọ.” (Jọn 16:4) Ugbu a, ọ na-agwa ha ya tupu ya ahapụ ha laa eluigwe. Ihe a ọ gwara ha ga-enyere ha aka ka ha ghara ịsụ ngọngọ mgbe e mechara.
Jizọs gwakwara ha, sị: “M na-alakwuru onye zitere m, ma ọ dịghị otu onye n’ime unu na-ajụ m, sị, ‘Olee ebe ị na-aga?’” Ha ajụbuola Jizọs ná mmalite mgbede ụbọchị ahụ ebe ọ na-aga. (Jọn 13:36; 14:5; 16:5) Ihe Jizọs kwuru banyere mkpagbu a ga-akpagbu ha mere ka ahụ́ nwụọ ha, nke na ha na-eruzi uju. Nke a mere ka ha ghara ịjụkwu ya ajụjụ gbasara ebube ọ ga-emecha nweta ma ọ bụkwanụ uru ebube a ga-abara ndị na-efe Chineke. Jizọs chọpụtara ihe ha na ya na-alụ. N’ihi ya, ọ gwara ha, sị: “N’ihi na agwawo m unu ihe ndị a, obi unu ejupụtawo n’iru uju.”—Jọn 16:6.
Jizọs gwaziri ha, sị: “Ọ bụ maka ọdịmma unu ka m ji na-ala. N’ihi na ọ bụrụ na mụ alaghị, ihe inyeaka ahụ agaghị abịakwute unu ma ọlị; ma ọ bụrụ na mụ alaa, m ga-ezitere unu ya.” (Jọn 16:7) Ọ gwụla ma Jizọs ọ̀ nwụrụ ma laghachi eluigwe ka ndị na-eso ụzọ ya ga-eji nweta mmụọ nsọ. Jizọs nwere ike izigara ndị na-eso ụzọ ya mmụọ nsọ ka ọ na-enyere ha aka n’agbanyeghị ebe ọ bụla ha nọ.
Mmụọ nsọ ahụ ‘ga-enye ụwa ihe àmà doro anya banyere mmehie na ezi omume na banyere ikpe.’ (Jọn 16:8) Mmụọ nsọ a ga-agba ndị nọ n’ụwa n’anwụ na ha enweghị okwukwe n’Ọkpara Chineke. Jizọs ịlaghachi eluigwe ga-eme ka o doo onye ukwu na onye nta anya na ọ bụ onye ezi omume. Ọ ga-egosikwa ihe mere e kwesịrị iji maa Setan, bụ́ “onye na-achị ụwa a,” ikpe ọnwụ.—Jọn 16:11.
Jizọs gwakwara ndịozi ya, sị: “M ka nwere ọtụtụ ihe m ga-agwa unu, ma unu apụghị ịghọta ha ugbu a.” Mgbe ọ ga-awụkwasị ha mmụọ nsọ, mmụọ nsọ ahụ ga-enyere ha aka ịghọta “eziokwu niile.” Ịghọta eziokwu a ga-enyere ha aka ịna-akpa àgwà ziri ezi.—Jọn 16:12, 13.
Jizọs kwuru ihe ọzọ nke gbagwojuru ndịozi ya anya. Ọ sịrị ha: “N’oge na-adịghị anya, unu agakwaghị ahụ m, n’oge na-adịghịkwa anya, unu ga-ahụ m.” Ha jụrịtara onwe ha ihe Jizọs bu n’obi kwuo ihe a. Mgbe Jizọs chọpụtara na ha chọrọ ịjụ ya ajụjụ banyere ihe a o kwuru, ọ gwara ha, sị: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, unu ga-akwa ákwá ma tie mkpu arịrị, ma ụwa ga-aṅụrị ọṅụ; unu ga-eru uju, ma a ga-eme ka iru uju unu ghọọ ọṅụ.” (Jọn 16:16, 20) Mgbe e gburu Jizọs n’ehihie echi ya, ndị ndú okpukpe ṅụrịrị ọṅụ, ma ndị na-eso ụzọ Jizọs ruru uju. Ma iru uju ha ghọrọ ọṅụ mgbe a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ. Ha ṅụrịkwuru ọṅụ mgbe ọ wụkwasịrị ha mmụọ nsọ.
Jizọs ji ọnọdụ ndịozi ya nọ na ya tụnyere nwaanyị ime na-eme. Ọ sịrị: “Mgbe nwaanyị na-amụ nwa, ọ na-ahụju anya, n’ihi na oge awa ya eruwo; ma mgbe ọ mụpụtara nwa ahụ, ọ dịghị echeta ahụhụ ahụ ọzọ n’ihi ọṅụ o nwere na ọ mụwo mmadụ n’ụwa.” Jizọs gwara ha okwu gbara ha ume. Ọ sịrị ha: “Unu onwe unu, n’ezie, na-eru uju ugbu a; ma m ga-ahụ unu ọzọ, obi unu ga-aṅụrịkwa ọṅụ, ọ dịghịkwa onye ga-anapụ unu ọṅụ unu.”—Jọn 16:21, 22.
Ndịozi Jizọs arịọtụbeghị Chineke ihe n’aha Jizọs. Ma ugbu a, Jizọs gwara ha, sị: “N’ụbọchị ahụ, unu ga-arịọ [Nna m] ihe n’aha m.” Gịnị mere ha ga-eji arịọ ihe n’aha ya? Ọ̀ bụ maka na Chineke achọghị ịnụ arịrịọ ha? Mba. Jizọs gwara ha, sị: “Nna m n’onwe ya hụrụ unu n’anya nke ukwuu, n’ihi na unu hụrụ m n’anya nke ukwuu . . . dị ka onye nnọchiteanya nke Nna m.”—Jọn 16:26, 27.
Ọ ga-abụ na ihe a Jizọs gwara ndịozi ya mere ka obi sie ha ike ịgwa ya, sị: “Anyị ji nke a kwere na i si n’ebe Chineke nọ bịa.” Ma, ihe na-aga ime n’oge na-adịghị anya ga-eme ka a mata ma hà ji obi ha niile kwere n’ihe a ha kwuru. Jizọs gwara ha ihe na-aga ime mgbe ahụ. O kwuru, sị: “Lee! Oge awa na-abịa, n’ezie, ọ bịawo, mgbe a ga-achụsasị unu, onye ọ bụla alaa n’ụlọ ya, unu ga-ahapụkwa naanị m.” Ma, ihe ọ gwara ha mere ka obi sie ha ike. Ọ gwara ha, sị: “Agwawo m unu ihe ndị a ka unu wee site na mụ nwee udo. N’ụwa, unu na-enwe mkpagbu, ma nweenụ obi ike! Emeriwo m ụwa.” (Jọn 16:30-33) Ihe a Jizọs kwuru gosiri na ọ ga-anọnyere ha. Obi siri ya ike na ọ bụrụ na ndịozi ya ejisie ike na-eme uche Chineke n’agbanyeghị mbọ niile Setan na-agba ka ha kwụsị ime uche Chineke, ha ga-emeri ụwa, otú yanwa meriri.
Olee ihe Jizọs kwuru nke wutere ndịozi ya?
Gịnị mere na ndịozi Jizọs enweghị ike ịjụkwu Jizọs ajụjụ?
Olee ihe Jizọs ji mee ihe atụ otú ndịozi ya ga-esi si n’iru uju ṅụrịwa ọṅụ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Nweenụ Obi Ike! Emeriwo M Ụwa”
jy isi 121 p. 278-279